FAQs - Shenzhen Penyai Technology Co., Ltd.
LCD VS Direct View akatungamirira Video Walls: Zvaunofanira Kuziva
Kana uri kumusika kuti Visualization gadziriro, unofanira kunge wakawana kuti mavhidhiyo rusvingo kuratidzirana anouya nenzira nekuwanda kwenzira dzekunamata chikuva maumbirwo, makuriro, uye ruzivo. Ungave wakacherechedza kuti vagadziri vakawanda vanoshandisa mazita akasiyana nokuda chete ruzivo uye kuti dzinopesana dzinofunga nezvazvo zvemichina anoita zvakanaka.
Zvinonzwisisika izvi zvinogona kuumba yakawanda kuvhiringidzika kuti vatengi. Nokuti vanhu vazhinji, kunyanya pane kuvhiringika ndiwo musiyano pakati maviri akakurumbira kuratidzwa mhando: "LCD" (dzimwe nguva anonzi "akatungamirira-LCD") uye "zvakaita" (dzimwe nguva anonzi "Direct View akatungamirira"). Kunyange zvinganzwika yakafanana, LCD uye Direct View akatungamirira vaviri vakatosiyana kuratidzwa michina yavo pachavo nemamwe zvinhu uye zvakanakira. Saka, chii vari makomborero iwayo? Sei zvakasiyana? Kana uri kutamburira kuti tipindure mibvunzo iyoyo, tiri pano kubatsira!
LCD (mvura sekristaro vanoratidza) ndiye sandara Panel vanoratidza mhando kuti zvave yakakurumbira kwemakore zvose vhidhiyo parusvingo uye nevatengi Electronics pamisika. Kazhinji, iwe kare kushandisa LCD michina kakawanda zuva - ndicho kuratidzwa mhando yaishandiswa smartphones dzakawanda, kombiyuta monitors, uye terevhizheni sefa.
LCD ukomba akaumbwa marongera emura sekristaro sandwiched pakati zvidimbu zviviri inobudisa rinoonekera. Liquid mechanical chinhu fuma inoyerera sezvinoita mvura asi ane mamorekuru kuti inogona nezvatinovavarira akafanana crystals. Kana magetsi rinoshandisirwa emura crystals, ivo crystals dzinofamba, vachibvumira chiedza kuti vapfuure kusika chifananidzo. Liquid crystals regai kubereka chiedza chavo, saka backlights vanosarudzirwa seri girazi kuti kuvhenekera kuratidzwa. LEDs (chiedza-emitting diodes) ndiyo inonyanya mhando backlight kushandiswa nhasi, uye vamwe vagadziri kutengesa kwavo kwakaita-backlit LCDs se "akatungamirira-LCD."
LCDs yakajeka, kutengeka, yakavimbika, uye vanopa kwazvo kuona unongotaura. LCD chinhu chaizvo mukuru-chisarudzo michina, saka LCD mavhidhiyo masvingo vanogona kuratidza wenyaya, mifananidzo, uye mavhidhiyo mune unopinza akadzama. Zvakwakanakira izvi kuti LCDs chiito chikuru kuti zvakawanda vhidhiyo rusvingo zvikumbiro, kubva namauto dzimba kuti yunivhesiti tsvakurudzo nzvimbo.
Kana LCDs vari tiled pamwe kusika vhidhiyo rusvingo, bezels (kana vazvo) vari kuonekwa pakati wacho aenzana. Izvi zvinogona kuonekwa se kuvamirira kana kuenzanisa LCD kuti musono kuratidzwa mhando dzakaita Direct View akatungamirira. Zvisinei, vagadziri vari achidzikisa bezel-upamhi nezera ose itsva anoratidza, saka uchawana kuti bezels iri mbishi LCDs vari ndoda kuoneka.
Direct View akatungamirira
Chii chiri anotungamirirwa?
Kufanana LCD, Direct View akatungamirira (dzimwe nguva chete inonzi "akatungamirira") chinhu sandara-Panel vanoratidza mhando dzinoshandiswa chiedza-emitting diodes (LEDs). Zvisinei, Direct View akatungamirira anoshanda chaizvo zvakasiyana LCD. Mune Direct View akatungamirira kuratidzwa, mazana tudukuduku LEDs vari akatasva zvakananga pamusoro panel, uye hapana mvura sekristaro kana inobudisa girazi inoshandiswa. Panzvimbo kushumira somushumiri backlight (akafanana zvavanoita LCD anoratidza), kuti LEDs muna Direct View akatungamirira kuratidzirana kubereka mifananidzo pachavo. Mumwe zvakatungamirira iri chaizvoizvo duku chiedza girobhu racho kuti inongorira chiedza ruvara kana imwe voltage rinoshandisirwa nayo. Masumbu tsvuku, mutema, nezvakarukwa zvitema LEDs dzikarongwa pamusoro emadziro, ndinosika renguva ruvara pixels vaifanira kubereka chifananidzo.
Direct View akatungamirira aimbova yakaderera-chisarudzo vanoratidza mhando kushandiswa zvikuru hofori panze anoratidza, asi pave LEDs zviduku mumakore achangopfuura vakaita zvisarudzo yakakwirira zvikuru zvinoita. Izvi zvichangobva mberi vakaita Direct View akatungamirira inonakidza nzira itsva indoor Video masvingo.
Direct View akatungamirira ukomba havana bezels, saka vanogona tiled pamwe kuumba zvachose musono vhidhiyo rusvingo . Akatungamirira Matafura zvakare yakajeka zvikuru, yakavimbika, simba-basa, uye vane yakanakisisa ruvara zvakarurama uye kuzorodza mwero upi kuratidzwa mhando iripo nhasi. Unhu izvi kuti Direct View akatungamirira rakanakisisa kusarudzwa pamwero mukuru digitaalinen signage uye mamwe mafomu kuti zvinoda mukuru-rova mifananidzo.
Kunyange zvazvo mitengo vanotarisirwa kutapudzwa kwemakore kuuya, yakakwirira-chisarudzo akatungamirira masvingo vari Parizvino kanoverengeka anodhura pane LCDs, saka rwokugadzira ichi ichiri pasigasvikirwi kuti vatengi vakawanda. Uyezve, kunyange soro-chisarudzo akatungamirira kuratidzirana achiri havagoni kupa Ultra-soro zvisarudzo iripo kubva LCD. Nokuti kushandiswa-nyaya kuti zvinoda kufunga wakaisvonaka mashoko, LCD kuratidzirana angangoitwa inodiwa.
Tinovimba mapfumbamwe takabatsira anojekesa musiyano - uye zvakajairika kubatsira - kubva LCD uye Direct View akatungamirira Video masvingo. Pakupedzisira, vaviri vari rakaisvonaka kuratidzwa michina, uye chete yako chaiyo kushanda uye bhajeti anogona kuona chakanakisisa chingaitwa iwe.